Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. इण्डो प्यासेफिक रणनीतिमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के ? – Emountain TV
इण्डो प्यासेफिक रणनीतिमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के ?
काठमाडौं, २६ भदौ । चिनियाँ बिदेशमन्त्री वाङ यी गत मंगलवार आफ्नो तिनदिने औपचारीक भ्रमण सकी चिन फर्कनु भएको छ । भ्रमणको क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो ।
भेटवार्ताको क्रममा इण्डो प्यासेफिकको विषयमा कुराकानी भएको थियो कि थिएन, सार्वजनिक गरिएको छैन । तर चिनियाँ बिदेशमन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्के लगत्तै चिनीयाँ बिदेश मन्त्रालयले निकालेको एक बिज्ञप्तिमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरीकाले अघि सारेको अमेरीकी रक्षा नीति इन्डो प्यासेफिकलाई नेपालले अस्विकार गर्ने बताएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
तर इन्डो प्यासेफिकका बिषयमा नेपालले अहिलेसम्म आधिकारीक धारणा सार्वजनीक गरीसकेको छैन । चीनले नेकपाका अध्यक्ष दाहालको नाम उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति सार्वजनीक गरेपछि सरकार विवादमा तानिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वयं अध्यक्ष दाहाल र सरकारको धारणा माग्न थालिएको छ ।
नेपालले सुरुदेखी नै असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको छ । परराष्ट नीति सम्बन्धी हरेक कुरामा राष्ट्रीय सहमती आबश्यकता हुन्छ । तर इन्डो प्यासेफिकका बिषयमा सरकारले हालसम्म स्वयम आफ्नै दलदेखी प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगाएतसँग न छलफल गरेको छ न त आधीकारीक धारणा नै सार्वजनीक गरेको छ ।
प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेपाली कांगेसका नेताले पनि यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ।
अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्म अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाई समेट्छ । एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चिनियाँ प्रभावमा रहेका मुलुकहरु आफ्नो उपस्थिति बढाउनतर्फ लागेको देखीन्छ ।
यस्तो अवस्थामा देशले अन्तराष्ट्रीय प्रकारका गठबन्धनमा सामेल हुनु भन्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराइको सुझाब छ ।
यस विषयमा सर्वत्र चाँसो बढेपछि सरकारले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले पुर्ववत मान्यतामा कुनै पनि परिर्वतन नआएको स्पष्ट पारेको छ ।
गत पुस ४ गते परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा त्यहाँका विदेशमन्त्री माइक पोम्पओसँग भएको द्विपक्षीय वार्तापछी नेपाल इन्डो प्यासेफिकमा तानीदै गएको छ ।
हाम्रो देश दुइ ठुला देश चिन र भारतको बिचमा छ । त्यसैले पनि नेपालको भुगोल माथी सवैको चासो छ । अहिले बिश्वका दुइ ठुला सक्ती राष्ट्र चीन ले अघि सारेको बि आर आइ परियोजना र अमेरीकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिका बिचमा परेको छ ।
नेपालले चिनले अघि सारेको बिआर आइ परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपनि इन्डो प्यासेफिकका बारेमा मौन छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाइ कसरी अघि बढाउछ भन्नेमा सवैले चासोका साथ हेरीरहेका छन् ।